Iwuli Mpempe Ikike Ike Karịa Iji Usoro Mmasị Ise Site na Ihe Omume
Ndị na-ere ahịa ga-aghọta na SEM ma ọ bụ SEO atụmatụ adịghị agbanwe agbanwe ma ghara inyere gị aka ịmata. Ihe kpatara ya bụ na search algorithms agbanwe agbanwe mgbe niile. Ka mgbanwe ndị a na-ewere ọnọdụ, otú a ka azụmahịa ahụ ga-eji ohere ọ bụla. Ọ bụ naanị ụzọ ROI ụlọ ọrụ ga-agbapụ. Ndị na-esonụ bụ usoro nzọụkwụ ise nke Igor Gamanenko kọọrọ, Semalt Onye Ahịa Gbasara Onye Ọrụ, ya na enyemaka nke onye ahụ nwere ike imezi ọrụ mpaghara SEO .
1 - how to read a teleprompter like a pro. 54% nke ndị America na-ere ahịa n'ihu ọha agbanweela site n'iji akwụkwọ ekwentị iji na-eme nchọgharị na intaneti ma na-eme nyocha mpaghara maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Ya mere, ọ pụtara na ndị ahịa obodo ahụ na-etinyere azụ nke azụmahịa na ndị nwe ha kwesịrị ịgbalịsi ike imeju ọdịmma ha ma ọ bụrụ na ha ga-adị ndụ na ụlọ ọrụ ahụ. Ihe atụ dị otú ahụ bụ ndị Parsons Behle na Latimer ndị iwu iwu si Utah, nke na-eme ka ndị ahịa ya mara akụkọ ọhụrụ ma ọ bụ iwu mpaghara nke nwere ike imetụta ha site na ebe nrụọrụ weebụ ha. Ha na-adabere na SEM ịkwọ ụgbọala gaa na saịtị ha, na uru dị na saịtị ha.
2. Njikọ na amaokwu ndị sitere na saịtị ndị a na-ahụ maka ebe a na-agbakwụnye dị ka ihe bara uru maka mgbasa ozi nke mgbasa ozi. Ha na-eme ka ọ dịkwuo mma ma ọ bụ na-ezigara ndị mmadụ ozi si n'aka SEO. Ọ dị mkpa iburu n'uche na njikọ na amaokwu dị n'etiti nsonaazụ dị elu maka nchọta nke Google nke algorithm. Ndị na-akpọ aha na-eme dịka ntụle nke obi ike nke na-eme ka ụlọ ọrụ ahụ nwee mmetụ na SEO na-esite na ntụkwasị obi ọ na-enweta..
3. Nọgide na-eme mgbalị PPC gị. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị ịchọta ndị nwe ụlọ ahịa bụ ndị na-eche na ha nwere ike iji obi ike mepụta PPC ma na-atụ anya ngwa ngwa. Google AdWords bụ ụlọ ahịa mgbasa ozi kachasị, ma maka otu ịhụ ROI, ha ga-abụ ọkachamara n'ọhịa. Na-agba ọsọ mgbasa ozi ịkwụ ụgwọ-na-achọ ahụmahụ na nghọta ma ọ bụrụ na onye na-atụ anya ka akara ha gosipụtara n'ụzọ ziri ezi. Mgbasa ozi ụlọ ahịa nwere ike iyi ka ọ na - enyere aka ịchekwa ego, ma ndị nwe ụlọ ahịa chọrọ ịchụ onye ọrụ ọrụ iji rụọ PPC maka ha maka na ọ bụ nhọrọ kachasị mma n'ime ogologo oge.
4. Foto ndị dị mma, mana ese foto dị mma. Ọ dị mfe ịkwado akara site na iji ihe ọmụma si n'aka ndị ha na ụlọ ọrụ ahụ na-arụkọ ọrụ n'ihu, ma ọ bụ ihe ndekọ nke na-egosipụta ihe ụlọ ọrụ na-anọchite anya ya. Otú ọ dị, vidio na-emezu nke a karịchaa. Ọbụna nke ahụ, mmadụ ga-echeta itinye ntinye na vidiyo ụdị ntinye ntụziaka, ndụmọdụ ego n'efu, ma ọ bụ aro na esi enweta coupon ego na saịtị ahụ. Ma ọ bụghị ya, vidiyo ahụ agaghị emetụta ya dị ka ọ tụrụ anya ya. Google etinyela otutu ihe na channel YouTube, ọ na - eme ka ọ bụrụ ebe a na - ewu ewu maka ụlọ ọrụ na - achọ inweta oke òkè nke ahịa ahịa mpaghara.
5. Market na Millennials. Ugbu a, e nwere ihe dị nde 86 nde puku afọ, nke pụtara na ọ bụ niche bara uru. Ọ bụrụ na ika ahụ erughị ha anya site na ngwa ngwa ha kacha amasị, mgbe ahụ enwere nnukwu ohere na ọ gaghị eru otu. Ka ọ na-erule afọ 2018, mgbasa ozi mgbasa ozi dị n'ime obodo ga-etinye ihe karịrị ọkara nke mkpokọta niile a na-emefu na mgbasa ozi.
Usoro kachasị mma bụ ịdabere na mpaghara SEO ọrụ na nzọụkwụ ise a kpọtụrụ aha na post a ga-enyere aka mezuo ya, ma melite ROI nke azụmahịa.